Torohevitra 5 ho an'ny diabeta voan'ny virus-News-Sinocare
Torohevitra 5 ho an'ireo diabeta voan'ny valanaretina Virus
Fotoana: 2020-03-01 Hits: 196
Tamin'ny 22 feb, ny Komisiona Nasionaly momba ny fahasalamana dia nanova ny anarana ofisialy ofisialy ny aretina naterak'ilay virus coronavirus ho virus, tamin'ny alàlan'ny lohateny noforonin'ny World Health Organization.
Na dia efa nandritry ny 3 volana mahery aza ny valanaretina pesta, dia mbola voafehy hatrany amin'ny famerana ny fihanaky ny valanaretina, indrindra ny fitomboan'ny trangan'aretina any amin'ny firenena hafa, toa an'i Japon, Korea Atsimo, Iran, sns.
Anisan'ireo maty notaterin'ny vaomieran'ny fahasalamana nasionaly fa ny ankamaroan'izy ireo dia marary antitra izay voan'ny aretina mitaiza, anisan'izany ny diabeta. Satria efa ela ny diabeta dia marary hyperglycemia, nitombo ny tosidra osmôlika, nosakanana ny phagocytosis an'ny sela fotsy, ary nihena ny hery fiarovan'ny vatana, izany no antony mahatonga ny diabeta mora iharan'izany. tsimokaretina aretina.
Ireto ambany ireto ny torohevitra momba ny diabeta hijanona ho salama ara-pahasalamana sy areti-mifindra.
1. Ny fanafody ampy tsara no zava-dehibe indrindra, toy ny fanafody, soritr'aretin'ny fitsapana glucose amin'ny ra, fanjaitra insuline sns.
Eo ambanin'ny valan'aretina, mba hampihenana ny loza mety hitranga amin'ny hopitaly fitsidihana hopitaly ary hialana amin'ny vahoaka, marary maro no mety hatsahatra amin'ny alalàn'ny fanafody, izay mety hampitombo ny risika ketoacidosis diabeta sy ny fahasarotana hafa. Ny fanafody tsy tapaka dia fepetra takiana mba hitazonana ny fatran'ny glucose ao anaty fifehezana, ary ny haavon'ny glucose ao anaty ra maharitra dia manampy ny vatana hiady tsimokaretina.
Soso-kevitra ny tokony hanomanana ireo diabeta mandritra ny 2-4 herinandro fanafody, hahazoana antoka fa hisy fanafody sy detection mitohy.
2. Ny fanaraha-maso ara-potoana ny glucose amin'ny glucose ara-potoana mba hiantohana ny haavon'ny glucose ao anaty lava sy maharitra eo ambany fifehezana ao anatin'ny faritra kendrena no laharam-pahamehana ho an'ireo diabeta, ary ny fitsapana ny glucose amin'ny ra ao an-trano dia tena zava-dehibe.
Raha voafehy ny haavon'ny glucose amin'ny ra, ilaina ny fitsapana FPG sy 2hPG farafaharatsiny 1-2 andro isan-kerinandro. Raha somary tsy voafehy ny haavon'ny glucose amin'ny rà dia asaina manara-maso isan'andro, mila manitsy ny sakafo sy ny fanafody ihany koa, ary avelao hiverina ny "glucose ao anaty" tony "haingana araka izay tratra.
Ho fanampin'ny fandrefesana dia tokony hanoratra na haka sary ny valin'ny fitsapana glucose ao anaty ra koa izy ireo. Tokony hampandrenesin'izy ireo amin'ny fomba mavitrika ny dokotera momba ny glucose amin'ny rà amin'ny alàlan'ny antso an-tariby na hafatra an-tsoratra rehefa tsy afaka mivoaka izy ireo. Tsy tokony hiraharaha ny fiovan'ny glucose amin'ny ra na hanatona olona tsy mila mari-pahaizana matihanina izy ireo.
3. Manaova asa tsara amin'ny famonoana otrikaretina any an-trano mba hisafidianana ireo entana famonoana otrikaina mety. Ny viriosy dia mora tohina amin'ny taratra ultraviolet sy ny hafanana, 56 degre Celsius 30 minitra, etil etera, etanol 75%, misy disinfectant klôroina, asidra peroxyacetic ary chloroform ary solvents lipid hafa no mety hanimba ny viriosy velona viriosy.
4. Miady amin'ny tsimokaretina, ny fomba mahomby indrindra dia ny manapaka ny loharanon'ny aretina ary mampihena ny fotoana lavitra ny trano. Rehefa tsy maintsy mivoaka ianao dia tsy maintsy tadidio fa manao sarontava ianao ary manao ny famonoana otrikaretina aorian'ny fiverenanao any an-trano, mba hisorohana ny otrikaretina mikraoba, hiaro tena, hanasana tanana bebe kokoa.
5. Tandremo ny fitazonana sakafo mahavelona sy sakafo mahasalama, manaova fanatanjahan-tena hatrany ary aza avela hipetraka mandritra ny fotoana maharitra. Ny fampihetseham-batana koa dia iray amin'ireo singa fototra hitehirizana ny glucose amin'ny fifehezana, hampitombo ny fahatsapana insuline ary hanampy amin'ny famitana ny metabolisma glucose sy gliosida hafa. Ny marary diabeta antitra sy antitra dia afaka mandeha sy midina isaky ny efitrano ao an-trano, maharitra 15 ka hatramin'ny 30 minitra. Ataovy ny enti-mody na milalao amin'ilay zaza mandra-pahatongan'ny hatsembohanao dia ireo hevitra tsara ihany koa.
Tsy isalasalana fa ny fanohanana tsara indrindra ho an'ny mpitsabo voalohany mba hanao asa tsara amin'ny fanaovana fanaraha-maso glucose amin'ny ra ao an-trano, hiatrehana ny valan'aretina pnemonia, hampihena ny isan'ny fitsidihana ara-pitsaboana, ary hamantatra ara-potoana ireo soritr'aretina atahorana mafy sy ny filàna maika amin'ny fitsaboana. fitsaboana.
Raha mbola eo am-panatanterahana ezaka mafy isika mba hifehezana ilay valanaretina coronavirus vaovao ary haneho fihetsika tsara sy tompon'andraikitra dia handresy ny ady amin'ny virus atsy ho atsy.
Pejy mialoha: Q&A ho an'ny Sinocare SARS-CoV-2 Antibody Test Strip
Pejy manaraka: Ireo diabeta dia mora tratran'ny aretina Virus vaovao